दसैंमा गाउँ आउनेलाई क्वारेन्टाइनमा राख्छाैं : डम्बरबहादुर अर्याल [अन्तर्वार्ता]
नेपाल लाइभ शनिबार, असोज २४, २०७७, १२:२५
कोरोना संक्रमण बढ्दो छ। दसैं–तिहारजस्ता चाडबाड आउनै लागेका छन्। मानिसहरु काठमाडौंबाट गाउँ जाने क्रम सुरु भएको छ। यस्तो बेला मानिसहरुसँगै कोरोना संक्रमण पनि गाउँ भित्रने सम्भावना धेरै छ। यसले गर्दा संक्रमण कम रहेका ग्रामीण भेगमा संक्रमण दर बढ्ने खतरा धेरै छ। यसका लागि स्थानीय तहले आ-आफ्नै तरिकाले काम गरिरहेका छन्। काठमाडौंबाट नजिक रहेको सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची नगरपालिकाले संक्रमण भित्रन नदिन कस्तो तयारी गरिरहेको छ। नगरपालिकाका मेयर डम्बरबहादुर अर्यालसँग नेपाललाइभले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश:
सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची काठमाडौंबाट नजिक छ। दसैंमा मानिससँगै संक्रमण पनि गाउँ आउने भएकाले नगरको तयारी के छ?
सबैभन्दा पहिलो कुरा हामीले नगरबासीलाई स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाउन आग्रह गरेका छौं। अहिलेसम्म गाउँ र बस्तीहरुमा संक्रमण छैन। बाहिरबाट आउनेहरु नै क्वारेन्टाइन र आइसोलेसनमा बसेका छन्। कि खाडीबाट कि त भारतबाट आएका मानिसहरु आइसोलेसन र क्वारेन्टाइनमा बसेका छन्। उनीहरुको नतिजा पोजेटिभ आएको छ। अब दसैं आएपछि मानिसहरु विभिन्न ढंगले घर फर्कने निश्चित छ। उनीहरुलाई सुरक्षित राख्नेबारेमा हामीले केही निर्णय गरेका छौं।
नगरको विपत व्यवस्थापन समितिले लक्षण देखिएकाहरुलाई पिसीआर परीक्षण गराउने अनि पोजेटिभ देखिएमा आइसोलेसनमा राख्ने निर्णय गरेको छ। नेगेटिभ आयो भने लक्षण नघटेसम्म आइसोलेसनमा राख्ने अनि घर फर्काउने गर्दै आएका छौं। दसैंलक्षित गरेर हामीले वडा-वडामा क्वारेन्टाइन र आइसोलेसन बनाउने तयारी गरेका छौं। यो समयमा घरबाट पर राख्न नसकिने भएकाले उनीहरुलाई वडामै राख्ने हाम्रो तयारी हो। पोजेटिभ आएकाहरु र नआएकाहरुलाई अलग्गै राख्ने व्यवस्था गर्छाैं। यही रुपमा योजना बनाएर हामीले काम गरिहेका छौं।
अब वडाले यसको व्यवस्थापन गर्छ?
हो, गाउँमा आउने मानिसका बारेमा धेरै जानकारी हुने ठाउँ वडा पनि हो। हाम्रोमा १३ वटा वडा छन्। अलग–अलग बजेट छुट्याइएको छ। अलग–अलग बाटोबाट मानिस गाउँ जाने र नगरभन्दा वडामै जानकारी हुने भएकाले वडालाई जिम्मेवारी दिइएको हो। वडाले छिटै यस्ता क्वारेन्टाइन र आइसोलेसन सञ्चालन गर्ने छन् ।
वडाले नगरभित्र प्रवेश गर्ने मानिसहरुको तथ्यांक राखेको छ कि छैन?
मेलम्ची नगरपालिका यस्तो क्षेत्रमा छ, जहाँ धेरै बाटो हुँदै प्रवेश गर्न सकिन्छ। हामीले मुख्य नाकामा यो काम सुरु गरिसकेका छौं। मेलम्ची साँखु, सुन्दरीजल, जिरोकिलो हुँदै जान सकिने भएकाले पूर्ण व्यवस्थित त हुन सकिँदैन। तर जति सकिन्छ व्यवस्थापन गरेका छौं।
नगरमा कति आइसोलेसन र क्वारेन्टाइन छन्?
नगरमा अहिले संक्रमितहरु बसिरहेका २ एउटा आइसोलेनसन सेन्टर छन्। मेलम्चीमा रहेको एउटा आइसोलेसन बेडको छ भने बाहुनेपाटीमा १० बेडको छ। आवश्यक परे यहाँ १० बेड थप गर्न सकिन्छ।
अहिले नगरमा कति संक्रमित छन्?
अहिले ६ जना छन्। अहिलेसम्म क्वारेन्टाइनमा बसेका कसैलाई पनि लक्षण देखिएको छैन। त्यसैले कसैलाई पनि कतै पठाउनु परेको छैन। त्यहीबाट उपचार गरेर फर्केका छन् ।
मेलम्ची नगरपालिका पर्यटकीय र चर्चित क्षेत्र पनि हो, यसका लागि नगरको के योजना छ?
हामीले पर्यटकका लागि पदमार्ग निर्माण गरेका छौं। जरसिंहपौवा हुँदै मेलम्चीको १, २, ३, ४, ११, ९ लगायतका वडा समेटेर पदमार्ग बनाएका छौं। मेलम्चीदेखि गुफाडाँडामा पदमार्ग बनाएका छौं। यी क्षेत्रमा जिपीएस राखिएको छ। पर्यटक बस्न ५ वटा होम स्टे बनाएका छौंं, जहाँ पर्यटकले स्थानीय स्वाद लिन पाउछन्। पार्क निर्माणदेखि बसमा जाने यात्रु्को व्यवस्थाका लागि होटल व्यवस्थित गरिरहेका छौं।
मेलम्चीमा एउटा सरोबर बनाउने महत्वाकांक्षी योजना अघि सारेका छौं। यसको डिपीआर तयार भइरहेको छ। त्यसपछि यो टेन्डरमा जानेछ । काठमाडौ विश्वविद्यालयसँग यसबारेमा छलफल भइरहेको छ। १० अर्बसम्मको योजना छ। मध्यपहाडी लोकमार्गसमेत जोडिएकाले यसलाई पनि केन्द्रमा राखेर काम गर्दैछौं। मेलम्चीको पानी काठमाडौं आउन लागेकाले त्यसलाई पूरा गर्न र वातावरण संरक्षण गर्न सरोबरको सोच हामीले अघि बढाएका हौं।
हामीले उपभोग गर्न सक्ने अर्को क्षेत्र भनेको त्यहाँका खोलाहरुको ढुङ्गा-गिटी हो। यहाँको अमूल्य वस्तु बग्दै भारतसम्म पुग्ने भएकाले त्यसलाई रोक्ने योजना नगरले बनाइरहेको छ। नगरले नै ढुङ्गा, गिटी, बालु्वा भण्डारण गरेर आफैंले बिक्री गर्ने योजना बनाइरहेको छ। उक्त कार्यक्रमबाट नगरले झन्डै एक अर्ब रुपैयाँसम्म आम्दानी गर्ने लक्ष्य लिएर काम अघि बढाएको छ।
गिटी, बालुवाको चोरी निकासी धेरै हुने गरेको छ। नगरले यसलाई रोक्न के गरिरहेको छ?
अहिलेसम्म नगर यो मामलामा विवादमा आएको छैन। कहिलेकाही अनुमतिभन्दा अलि बढी निकालेको पाएका छौं। यस्तो गर्नेलाई कारबाही गर्ने गरेका छौं। चोरी निकासी भएको छैन। पहिलाभन्दा अहिले राम्रो हुँदै गएको छ। मेलम्ची स्वप्न सरोवरको काम अघि बढिरहेको छ। त्यो सुरु भएपछि योभन्दा मुनि कुनै पनि क्रसर राख्न पाइदैन। नगरपालिकाले नै निकालेर उनीहरुलाई बिक्री गर्ने छ। जति आउँछ नगरले नै संकलन गरेर बिक्री गर्छ। मापदण्ड नपुगेकाहरु बन्द हुन्छन्। उनीहरु खोलामा स्काभेटर लिएर जान पाउँदैनन्। हामीले अन्यत्रको विवाद देखेर यो योजना बनाएका छौं।
नगरभित्रका दूरगामी महत्वका कस्ता योजना अघि बढेका छन्?
नगरले लामो समयका योजनामा गुरुयोजना बनाएर काम थालेको छ। प्रत्येक वडामा जोड्ने सडक ग्राभेल गरेका छौं। ग्रीन सिटी र पार्कहरु बनाएका छौं। वडा कार्यालयहरु बनाउने काम तीव्र गतिमा भइरहेको छ। नगरको आफ्नैं भवन बनाएका छौं। वडा पनि अब आफ्नै भवनमा बस्नेछन्। खानेपानी पनि ‘एक घर एक धारा’ को योजना ६० प्रतिशत समाप्त भएका छन्। हामीले सिन्धुपाल्चोककै ठूलो बसपार्क निर्माण गरेका छौं।
मेलम्ची बढ्दो आधुनिक सहर हो। त्यो कुरा ख्याल गरेर विकासका योजना अघि बढाएका छौं। स्वास्थ्य, कृषि र शिक्षाको क्षेत्रमा काम गरिहेका छौं। स्थानीय सरकार भएपछि सबै काम गर्नुपर्ने रहेछ। यसपालि सिन्धुपाल्चोकमा प्रकृतिले धेरै दुःख दिएको छ। सबै क्षेत्रका सडक क्षतविक्षत भएका छन्। तिनीहरुको मर्मत गर्नुपर्ने पहिलो दायित्व आइपरेको छ।
मेलम्ची कृषि क्षेत्र हो कि पर्यटकीय?
यो अहिले अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा चर्चित क्षेत्र हो। पाँचपोखरी, हेलम्बु, गोसाईकुण्डसम्म जान सक्ने महत्वको क्षेत्रमा हामी छौं। यहाँ एक रात बिताएर जाने बाटो बनाउन सक्यौं भने मेलम्ची नगरको विकास र आम्दानीको मुख्यस्रोत बन्छ। यसले जनताको जीवनस्तरमा आमूल परिर्वतन ल्याउने छ। नगर यही सोचका साथ अघि बढिरहेको छ। यहाँको कृषि उत्पादन पनि उत्तमस्तरको भएकाले यसलाई पनि नगरले महत्व दिएको छ। अर्गानिक उत्पादनसमेत वृद्धि गर्न नगरले योजना बनाइरहेको छ।
आज दसैंको छैटौं दिन कात्यायनीको पूजा आराधना गरिँदै
२० वर्षपछि सुन्दर राजधानी सहर प्रदेशका जनतालाई उपहार दिन्छौं : शंकर पोखरेल [अन्तर्वार्ता] हामीलाई आकर्षण गरेको मुख्य कुरा भनेको नदी किनार नै हो । नदी सभ्यतामा आधारित सहरीकरण भनेको दुनियाँमा धेरैतिर सुन्दर र आकर्षक मान्ने... बिहीबार, असोज २२, २०७७
आज दसैंको छैटौं दिन कात्यायनीको पूजा आराधना गरिँदै बिहीबार, कात्तिक ६, २०७७